"ए के हो खै " भनेर मैलै मोबाइल खोसें । भरखर हेरेको क्लीप रन थीयो । "पख तं यस्तो राख्छस ममीलाइ आजचैं नभनी कां छाड्छु र" भनेर त्यस को मोबाइल बोकेर हीडेजस्तो गरें ।
"ए अनु.................ए रुपेश तीमीहरु के गर्दै छौ हँ ।" तलबाट ममिले कराउनु भयो । ला बुढियाले था पाइन की क्या हो भनेर मन ढक्क फुल्यो ।
" थाह छैन ... तं प्रयास गर्छस त ... छीराएर हेरन ... शायद छिर्दैन होला ... !" मलाइ पनी थाह थीयो उसलाई पनी थाह थीयो ... किन पस्दैन थीयो होला र।
"त्यसो भए म के गरुँम् त ... कसरी पसाउने ...? "
"यसो गर तं ममाथी चढेर तेरो लीङ्ग मेरो योनीमा राखेर कम्मरले ठेल जान्छ कि...लु आइज चढ... !" मनमनै मलाइ आनन्द हुन थालीसकेको थीयो ।
" आहह ... रुपक ... कती मजा आयो ... गर गर छीटो गर मलाइ मजा दे ... भित्र बाहिर गर अरु अरु हान्न हान ... "
तैंले त खत्तम पारीस नी मलाइ... ... ... ...
ला दिदि नहुनु भइगो ... ... ...
हो र ... ... फेरि सक्छस त
हैन मै खेलाइ दिन्छु ... ... ... ... भनेर मैले उसको लीङ्ग खेलाउन थालेको त फेरी उठ्यो
रुपेश अब भने हतार नगरी कन विस्तारै समय लगाएर गर है ... ... भने
अब फेरी फरी पनी गरुंम है दिदि ... ...
fucking boy May 30, 2012 at 1:58 AM
hami ali pani chance deau na anita
neywar August 13, 2012 at 12:27 PM
vag hawa ko gaff lauxa
i want to sex with my bhangi simran
Cabin Verma March 16, 2013 at 5:33 AM
Cabin Verma March 16, 2013 at 5:49 AM
Hi, anita i like to meet u
Power Ful May 7, 2013 at 4:12 AM
wow nice story yr .... maila ta yo story padha ra 36 gara yr...
lama sangey June 18, 2013 at 6:42 PM
K ho vai sanga matra chikna ....ma sanga chikna ho jhan tmro vai bhan da badi maza garare dinxu....tmro puti bta pani nai pani nikale dinxu ....ma ta ful exprience wala po hu gipro le tmro puti lai chate chate pani pani banae dinchu ma sanga xhikne ho add gara malai mero fb id ma lama_punk169@hotmail.com ho..ma tmro pratichya ma xu hai mero 9inch ko lado tmro puti ko parkhaie ma xa hai
rock thapa June 27, 2013 at 12:34 AM
sexy pandy July 20, 2013 at 7:35 AM
Chilauna ko bot ma ago dan dan didi ko puti dakda bai ko lado than than hahaha
Timi lai bhetnai parla
suraz yba August 9, 2014 at 12:04 AM